Cordyceps-ka ugu Fiican Soo saarista Milatari ee Soo saarista Budada iyo Warshada |Wuling
Nooca: Soosaarka likaha
Qaybta: jidhka miraha
Nooca Soo saarista: Soo saarista biyaha-ehol
Muuqashada: budada jaalaha ah ee brown
Walaxda firfircoon: Polysaccharides 30% - 50%
Tijaabi hooyada: HPLC
Kaydinta: Ku kaydi meelo qabow oo engegan, ka fogow iftiinka xooggan.
Nolosha shelf: 2 sano marka si habboon loo kaydiyo.
Cordyceps, oo loo yaqaan Cordyceps militaris, waa kakan fungus Cordyceps miltaris parasitic oo ku yaal dirxiga bat lavae iyo dirxigeeda.Cordyceps-ka si macmal ah loo beeray waxa loo qaybin karaa laba nooc.
Jidhka miraha remella → Shiidi( in ka badan 50 meshes )→ Soo saar (biyo sifaysan 100 ℃ saddex saacadood, midkiiba saddex jeer) → diirad → qallajinta buufin
Cuntada, Daawooyinka, Goobta qurxinta
● Kanada● Ameerika● Koonfurta Ameerika● Australia● Kuuriya● Japan● Ruushka● Aasiya● Boqortooyada Ingiriiska● Isbayn● Afrika
● Ku taageer macmiilka R&D badeecada cusub.
1. Cordycepin ee Cordyceps waa antibiyootiko ballaadhan oo aad u xoog badan, ka-hortagga kansarka iyo maaddooyinka daawada fayraska.
2. Polysaccharides ee ku jira Cordyceps waxay nidaamin kartaa difaaca, ka hortagga burooyinka waxayna caawisaa la dagaalanka daalka.Waxa kale oo ay leedahay hawlaha da'da ka-hortagga, antioxidation, yaraynta sonkorta dhiigga iyo saamaynta kale.
3. Cordyceps acid ee Cordyceps waxay kor u qaadi kartaa dheef-shiid kiimikaadka bini'aadamka, hagaajinta microcirculation, ka hortagga iyo daaweynta thrombosis cerebral, dhiig-baxa maskaxda, wadnaxanuun myocardial iyo wixii la mid ah.
Hore: Chaga Soo saarta Bacda Budada Kaabayaasha likaha
Xiga: Samee boqoshaada Soo saar Bacda Budada Kaabayaasha likaha